Crypto Mining Midziyo, Nyowani Bitcoin Miner, Nhare Yekuchera Mining - Tianqi
Inotungamira tekinoroji: Iyo cryptocurrency nhare yemugodhi bhokisi ratakagadzira nekugadzira rinogona kukusevidzira ingangoita 70% yemubhadharo wemigodhi. Zvakare, kushanda kwayo kwekuvimbika coefficient kwakanyanya kwazvo, uko kunogona kudzikisira tembiricha uye kuwedzera hupenyu hwebasa remuchina wemigodhi.
Hunhu hunovimbiswa uye mutengo wakaderera: Mutengo webhokisi remugodhi wakagadzirwa neTianqi Mining haugone kumisikidzwa zvichibva pachisungo chemhando yekutanga.
Yakabatanidzwa Mvura-yakanyoroveswa Kufambisa Mabhokisi Ekuchera
Zvakanakira rakabatanidzwa giraidhi kadhi ore bhokisi
chiyero chemakumi maviri-tsoka ore bhokisi kuyerwa kwemaseti zana nemakumi masere, kuwedzera nzvimbo yacho
teedzera kaviri mutsara dhizaini, yepamusoro mhepo kunze, padivi mweya mukati.
Ziva kugadzirwa kwemazhinji uye nekukurumidza kutumira kutumira
Ndokumbirawo kuti munyoro mucherechedze kuti inodiwa yekuisa voltage yeT17 + ndeye 220V.
Kutaurirana kunogamuchirwa kwemazuva makumi matatu nemakumi matatu nemashanu pagore, unogona kutirovera runhare kuburikidza neemail, nhare, Skype / Facebook / twitter! Bato redu rakasimba rehunyanzvi rinogara rakamirira chikumbiro chako.
Mushure mekunzwisisa zvaunoda, isu tinokupa iwe nyanzvi mazano uye makotesheni. Mushure mekunge odhita yasimbiswa, yedu mishanu yekugadzira mitsara ichatanga kuburitsa seyakakodzera nguva, uye kuitisa ongororo senge inoshanda bvunzo uye mhando bvunzo kuona kuti zvaunoda zvanyatso kusangana.
Vanotevera-vekutengesa timu vacharonga zvinokurumidza logistics uye zvifambiso zvako, kuronda uye zivisa iyo yese maitiro kuona chengetedzo kusvika kwauri.
Izvo hazvina basa kuti kana uine mazano matsva kana pfungwa kana izvo zviripo zvigadzirwa hazvigone kuzadzisa zvaunoda. Tiudze zvese zvaunoda, isu tichagadzira uye kuburitsa zvinoenderana nezvaunoda zvakanyanya, uye ugozvipa kwauri nekukurumidza sezvazvinogona.
Kuziva zvido zvako zvekuchera zvekurumidziro, tinoedza kudzikisira chero chinhu chisina kunaka usati waendesa. Kana iwe uchida kusarudza zvigadzirwa zvedu, tichazviisa pane saiti. Nounyanzvi hwedu hwehunyanzvi, tinogona kuisa bhokisi remugodhi mukushandisa nekukurumidza sezvazvinogona. Saka yako yakakosha nguva inoponeswa.
crypto yekuchera asic, btc mudziyo, antbox mudziyo, akashandisa michina yemigodhi yekristpto, antminer mudziyo, mudziyo we bitmain,